संक्रमण पुष्टिपछि टिचिङ अस्पतालका १६ चिकित्सकसहित ४० क्वारेन्टाइनमा, गंगालालमापनि पुगेको पुष्टि « Janaboli
संक्रमण पुष्टिपछि टिचिङ अस्पतालका १६ चिकित्सकसहित ४० क्वारेन्टाइनमा, गंगालालमापनि पुगेको पुष्टि
काठमाडौ । शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा रहेको चिकित्साशास्त्र अध्ययान संस्थान (आइओएम) को मनमोहन कार्डियोभास्कुलर एण्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा भर्ना भएकी एक महिलामा कोरोना संक्रमण भेटिएपछि अस्पतालको मुटुरोग सेवा स्थगित भएको छ । अस्पतालमा जेठ ६ गते भर्ना भएकी हेटौडाकी एक ५४ वर्षे महिलामा शुक्रबार साँझ कोरोना पोजेटिभ भएको थियो ।
अस्पतालका अधिकांश मुटुरोग विशेषज्ञ महिलासँग प्राइमरी कन्ट्रयांकमा रहेको घोषणागरी क्वारेन्टाइनमा गएपछि मुटुरोग सेवा स्थगित गर्नु परेको हो । मुटुरोगको ओपिडीसँगै क्याथल्याबसमेत बन्द हुने अस्पताल स्रोतले जनाएको छ । मुटुको समस्या भएकी ती महिलामा निमोनियासमेत देखिएपछि चिकित्सकहरुले शंका लागेर कोरोना परीक्षण गर्दा संक्रमण भेटिएको हो ।
सोलगतै राति ६ घण्टासम्म अस्पतालका चिकित्सकहरुको बैठक बसेर थप रणनीति बनाएको थियो । अहिले ती महिलालाई गणेशमान सिंह इएनटी भवनमा रहेको आइसोलेसन वार्डमा सारिसकिएको छ । अस्पतालमा कन्ट्रयाक ट्रेसिङका क्रममा अस्पतालका १५ भन्दा बढी चिकित्सकले आफू संक्रमित महिलासँग प्राइमरी कन्ट्याकमा आएको घोषणा गरेपछि सबै चिकित्सक होमरइन्टिच्युसनल क्वारेन्टाइनमा छन् ।
चिकित्सक, नर्स र अन्य कर्मचारीसमेत गरेर ४० जनाको हाराहारीमा क्वारेन्टाइनमा गएको अस्पताल स्रोतले बनाएको छ । अस्पतालका ३ मात्रै मुटुरोग विशेषज्ञले आफु प्राइमरी कन्ट्याकमा नरहेको भन्दै क्वारेन्टाइनमा नजाने बताएका छन् । आइओएम अन्तर्गतको कोभिड टीमका सदस्यसमेत रहेको सर्जन डा. रञ्जन सापकोटाले संक्रमित महिलाको कन्ट्रयाक ट्रेसिङका आधारमा सम्पर्कमा आएकाहरुकाहरुको स्वाब संकलन, क्वारेन्टाइन, बिरामीको व्यवस्थापन भइरहेको छ । ‘सकेसम्म छिट्टै सबै सेवालाई सुचारु गर्ने प्रयात्नमा छौ’ डा. सापकोटाले भने ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका स्रोतका अनुसार ती महिला मनमोहन सेन्टर आउँनुपूर्व गंगालाल र चावेलको एक निजी अस्पतालमा समेत पुगेको पाइएको छ । गंगालाल अस्पताल स्रोतका अनुसार ती महिलालाई गंगालालमा कम्तिमा ४५ मिनेटमा मात्रै विताएकी थिइन् । त्यस क्रममा एक्पोजर भएका हुनसक्ने कम्तिमा ३ जनाको स्वाब संकलन गरेर पिसिआर गर्ने तयारी भएको छ ।
काठमाडौ । नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत रञ्‍जित रेले नेपालसँगको सीमा समस्या समाधानका लागि भारतले तत्काल
नेपालमा यो कस्तो अनौठो : कोरोना ‘पोजेटिभ’ २७ जनालाई अस्पतालबाट डिस्चार्ज
काठमाडौ । बुटवलको कोरोना विशेष अस्पतालबाट पोजेटिभ बिरामीलाई नै डिस्चार्ज गरिएको छ। १४ दिन आइसोलेसनमा
आज संक्रमित प्रहरी, कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मी भएकाले त्रास थपियो
काठमाडौ । प्रहरी र कर्मचारी पछि आज स्वास्थ्यकर्मीमा सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि क्वारेन्टिनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी संशकित